सावधान ! फेसबुक भाबिश्य्वानी यस्तो खतरा, गोप्य म्यासेजदेखि फेसबुक एकाउन्ट नै ह्याक हुने ...
काठमाडौं । काभ्रे भकुण्डेवसीकी अप्सरा गौतम पेसाले पत्रकार हुन् । राजधानीमा पत्रकारीता समेत अध्ययन गर्दै आएकी उनी एक अनलाईनमा जागिर समेत गरिरहेकी छिन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समेत सक्रिय रहेकी उनले बुधबार दिउँसो एउटा साथीले शयर गरेको लिंक देखिन । त्यहाँ साथीको भविष्यवाणी गरिएको थियो ।
उनलाई पनि आफ्नो भविष्वाणी गर्ने हुटहुटी चल्यो । ‘तँ किन जम्मिस् ?’ भन्ने प्रश्न उनलाई आश्चर्य लागेपछि आफू जन्मिनुको रहस्य जान्ने रहर लाग्यो र टेस्टोनी डटकममा देखिएको उक्त लिंक क्लिक गरिन् अर्को अप्सन आयो ‘लग इन वीथ फेसबुक’ अथात फपेसबुकसँग जोडिनु पर्ने थियो । उनले लग इन गरिन् । केही बेरको डाटा एनलाइसिस पछि उत्तर आयो – ‘म्यादी प्रहरी बन्न’ । त्यसपछि उनलाई यो एप्स नै वाहियात लाग्यो ।
यसरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आतंक मच्चाइरहेको टेस्टोनी डटकम निकै घातक एप्स हो । यसले फेसबुक प्रयोगकर्ताको निकै गोप्य म्यासेज समेत आफ्नो डाटामा कलेक्सन गरेर राखेको हुन्छ । ‘एप एक्सेस गरेपछि सुरुमै सोधेको हुन्छ, फेसबुकसँग जोडिने हो भनेर ? यसरी जोडिँदा यो एपले प्रोफाइल भित्रै छिरेर सबै कुराहरु रिड गर्छ । इन्फरमेशन लिन्छ,’ कम्प्युटर इन्जिनियर तथा वेभ मास्टर दिपेन घले भन्छन्,‘यो अमेरिकाबाट नै चल्ने हो । यो प्रयोग गर्नु राम्रो होइन ।’
उनका अनुसार फेसबुक नै ह्याक हुने संभावना भने न्युन छ ।
दियो पोस्ट डट कमको सहयोगमा: #जनहितमाजारि